SONATA-CANTATA: အိပ်မရတဲ့ ညအပေါင်းတွေရယ်
Are you thinking of gettinganew computer?
Are you having problems getting to sleep at the moment?
Do you see why men should get paid more than women?
အထက်ပါ မေးခွန်းတွေကို ဆရာမက သင်တန်းသူတွေ အချင်းချင်း တလှည့်စီ မေးစေပါတယ်။ ၁၅မိနစ် အချိန်ပေးထားခဲ့ပြီး ကိုယ့်နေရာကိုယ် ပြန်ထိုင်စေပြီးမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ အဖြေတွေကို တဦးချင်းစီ ပြောစေပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ အဖြေရဖို့ဆိုတာက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်မှု အပေါ်မှာလည်း မူတည်နေမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ မေးခွန်းက ကျယ်ပြန့်ပြီး လေးနက်သော်ငြားလည်း အဖြေက သေးသိမ်နေမယ် ဆိုရင် မှန်းခြေမကိုက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သမားရိုးကျမေးခွန်းကို မထင်မှတ်တဲ့ ရှုထောင့်က လှလှပပလေး ဖြေသွားမယ်ဆိုရင်လည်း တမျိုးတမည်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါမေးခွန်းတွေထဲမှာ မိမိအနေနဲ့ Do you see why men should get paid more than women? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး မေးခွန်းအဖြစ် စိတ်ထဲက ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းအတွက် ကျောင်းသူ အများစုရဲ့ အဖြေကတော့ No ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်ကတော့ Yes လို့ ဖြေပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ အဖြေတွေက ထူးခြားနေပြီပေါ့။ ဆရာမက ဘာကြောင့်လဲလို့ မလေးသူ Intan ကို မေးပါတယ်။ ယောက်ျားဟာ အိမ်ထောင်ဦးစီး တယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိသားစုကို ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ ယောက်ျားတွေရဲ့ ၀င်ငွေဟာ မိန်းမထက်သာသင့်ပါတယ်တဲ့။ သူတို့ လူမျိုးတွေရဲ့သဘာဝ၊ သူ့ရဲ့လက်ရှိ အနေအထားနဲ့ လိုက်လျောညီထွေစွာ သမားရိုးကျ ဖြေသွားတဲ့ အဖြေတခုလို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။ အဲ… နောက်တယောက်ကတော့ တိုင်ဝမ်မှာမွေး၊ ဂျပန်မှာ ပညာသင်ခဲ့တဲ့ စင်ကာပူသူပါ။ သူ့အဖြေကတော့ ယောက်ျားတွေက ပိုသန်စွမ်းလို့ ပိုရသင့်ပါတယ်တဲ့။ မိမိစိတ်ထဲက IT ခေတ်ကြီးထဲမှာ “အောက်လိုက်တဲ့ အဖြေ” လို့ မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာသင်ခန်းထဲမှာတော့ Yes or No မည်သည့်အဖြေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆရာမက Good, Very Good နဲ့ တချိန်လုံး motivate လုပ်နေတာပါပဲ။
အလကားသင်ပေးနေတဲ့ သင်တန်း (အဲ deposit S$150 တော့ တင်ထားရပါတယ်။ ကျောင်းခေါ်ချိန်ပြည့်ရင် သင်တန်းအဆုံးမှာ ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။) ကနဦး အစမှာတော့ သူ့ဆီက ကျောင်းသားတွေရဲ့ မိဘကိုသာ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် ပေးခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တန်းမှာ လာတက်တဲ့ လူဦးရေက သတ်မှတ်ဦးရေ မပြည့်မီတာကြောင့် (တတန်းလျှင် ဆယ်နှစ်ဦး) ကျောင်းသားမိဘမှ မဟုတ်ပဲ စိတ်ဝင်စားသူများ မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းသူ အများစုက သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် အိမ်ရှင်မတွေဖြစ်ပြီး ဘ၀ကို အေးအေးချမ်းချမ်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြတ်ကျော်နေကြသူများလို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Are you having problems getting to sleep at the moment? ဆိုတဲ့ မေးခွန်း အတွက် No ဆိုတဲ့ အဖြေ တညီတညွတ်တည်း ထွက်လာပါတယ်…။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆရာမက မိမိကိုမှ ဒီမေးခွန်းအတွက် ထူးခြားတဲ့ အဖြေမျိုးရခဲ့ပါသလားတဲ့ …။ မိမိရဲ့အဖြေကတော့ I cann’t find anyone, except me ပါ …
ဒီမှာ အိပ်မရတာ ဘာကြောင့်လဲ…
ဒီတော့အားလုံးက ကျမကို ၀ိုင်းကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်တစား မေးကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲပေါ့…။ ကျမအဖြေကတော့ လူတစ်စုရဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ခံရလို့ ၆-နှစ်ကျော် အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရတဲ့ သူရဲ့အိမ်ကို ခပ်ကြောင်ကြောင် လူတစ်ယောက် ကျုးကျော် ၀င်ရောက်လာတဲ့အတွက် ထောင်ဒဏ်ပါ ဆက်ကျခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ တရားဥပဒေအကြောင်း စဉ်းစားနေလို့ပါလို့ အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
Labels: BC English Course, သီတာ, ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း
ယောင်္ကျားတွေ ပိုသန်တာနဲ့ပဲ ပိုက်ဆံပိုရရတော့မှာလား၊ ကူလီလုပ်တာမှ မဟုတ်ပဲနော်၊ အူကြောင်ကြောင်နဲ့.. ၊
Haveagood sleep. Haveasweet dream. Cheers!
ယင်းဂလိတ် စာတွေမြင်ရင် အိပ်ငိုက်နေလို့ မသီတာရေ။ နောက်မှထပ်လာဖတ်ဦးမယ်နော်။
ဘလော့သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်သူမှတော့ လာမမေးကြပါဘူး ... ဘာကြောင့် အိပ်မရတာလဲ ဆိုတာကို... ဆရာမနဲ့ သင်တန်းသူတွေကတော့ ၀ိုင်းမေးကြလို့ ... နောက်ဆက်တွဲလေး ...